अल-नेट भ्वाइस प्याकमा कुन कम्पनी सस्तो ? « Tech News Nepal
२०७९, १७ असार शुक्रबार |
अल-नेट भ्वाइस प्याकमा कुन कम्पनी सस्तो ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, एनसेल आजियाटा र स्मार्ट टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि भ्वाइस कल, डेटा र एसएमएसमा विभिन्न प्याकेज ल्याएका छन् । यसअन्तर्गत सबै कम्पनीले अल-नेट भ्वाइस प्याक ल्याएका छन् ।
यो प्याकेज प्रयोग गरी एउटाबाट सबै नेटवर्कमा सुपथ मूल्यमा कुराकानी गर्न सकिन्छ । आज हामी कुन कम्पनीले कति शुल्कमा यो प्याकेज उपलब्ध गराइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछौं ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले अल-नेट भ्वाइस प्याकमा दुईवटा विकल्प दिएको छ । पहिलो, २६५ रुपैयाँमा ५०० मिनेट टकटाइम २८ दिनका लागि उपलब्ध छ भने दोस्रो, ५५० रुपैयाँमा १२०० मिनेट टकटाइम ३५ दिनका लागि उपलब्ध छ ।
प्रयोगकर्ताले प्याक लिन *1415*4# डायल गरी आफूले चाहेकाे भ्वाइस प्याकेज छान्न सक्छन् ।
एनसेलले अल-नेट भ्वाइस प्याक १४ मिनेट टकटाइम एक दिनका लागि करसहित १४ रुपैयाँ, ६५ मिनेट टकटाइम तीन दिनका लागि ४५ रुपैयाँ, १५० मिनेट टकटाइम एक साताका लागि करसहित ९४ रुपैयाँ र २२५ मिनेट टकटाइम १४ दिनका लागि १३५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएकाे छ ।
त्यस्तै ४७५ मिनेट टकटाइम २८ दिनका लागि २६५ रुपैयाँ र ७५० मिनेट टकटाइम २८ दिनका लागि ३८५ रुपैयाँ गरी विभिन्न छ ओटा विकल्प दिएको छ ।
त्यसका लागि प्रयोगकर्ताले *17118*3# गरी आफूले चाहेको प्याकेज खरिद गर्न सक्छन् ।
स्मार्ट सिम प्रयोगकर्ताका लागि अल-नेट भ्वाइस प्याकको दुईवटा विकल्प छ । कुनै पनि नेटवर्कमा कुराकानी गर्न सकिने १२ मिनेट टकटाइम एक दिनका लागि करसहित १२.७७ रुपैयाँमा उपलब्ध छ ।
त्यसका लागि प्रयोगकर्ताले *141*1*4*1# डायल गरी खरिद गर्न सक्छन् ।
साथै, १२० मिनेट टकटाइम एक महिनाका लागि करसहित १२६.४१ रुपैयाँमा उपलब्ध छ । प्रयोगकर्ताले *141*1*4*2# डायल गरी याे प्याक खरिद गर्न सक्छन् ।
काठमाडौं । कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्दा लगानी अर्थात पूँजीको कुरा आउँछ । तर फरिद
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक साताभित्र पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि कार्यविधि ल्याउने भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल भाडा तथा पूर्वाधार प्रयोगमा उठेको
काठमाडौं । मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ताका लागि कुन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा राम्रो इन्टरनेट चल्छ भन्ने
लक गरिएका फेसबुक प्रोफाइल कसरी हेर्ने ?
इन्टरनेट बिना जीमेल प्रयोग गर्ने तरिका
नेपालमा सुरु भयो स्याटलाइट इन्टरनेट
अनलाइनमा विवरण दिँदैनन् सहकारी, सफ्टवेयर चलाउन नजानेको हो वा सरकारलाई नटेरेको ?
शाओमी रेड्मी नोट ११ प्रो नेपाली बजारमा, कति होला मूल्य ?
चार्जिङ स्टेसन राख्नेलाई निःशुल्क ट्रान्सफर्मरसहित थ्री फेज लाइन दिँदै विद्युत प्राधिकरण